नेपाल आज | विजया दशमीमा टीका लगाउँदा कुन मन्त्र पढ्ने ? पुरुष र स्त्रीलाई टीका लगाउँदा यी मन्त्र पढ्नुहोस्
विजया दशमीमा टीका लगाउँदा कुन मन्त्र पढ्ने ? पुरुष र स्त्रीलाई टीका लगाउँदा यी मन्त्र पढ्नुहोस्
काठमाडौँ । आज नवरात्रको दशौँ दिन । आज दैवी शक्तिले आसुरी शक्तिलाई पूर्णतया पराजित गरेको प्रतीक स्वरुप र असत्य माथि सत्यको विजयको रुपमा विजया देवीको पूजा गरी विजया दशमी मनाइँदैछ ।
असत्यमाथि सत्य र आसुरीशक्तिमाथि दैवी शक्तिको विजयको प्रतीकका रुपमा मनाइने विजयादशमी बडादशैंँकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण दिन हो । घटस्थापना गरेकोे कलशको जलले वैदिक मन्त्र द्वारा अभिषेकगरि बुढापाका हरुको हातबाट आशीर्वाद स्वरुप जमरा फूल प्रसाद ग्रहण गरि मनाउने प्रचलन छ । जमरा गहुँ, जौँ, मकैसमेतको अंकुर हो ।
गहुँ र जौको अंकुर लगाउनाले सुख, शान्ति , समृद्धि र स्वास्थ्य लाभ हुने शास्त्रीय मान्यता छ । निधारमा विजया देवीको प्रसाद स्वरुप दही र रातो टीका लगाएर जमरा शिरमा राख्यो भने शिरको पीडा मानसिक अशान्ति बाट बच्न सकिन्छ ।
घटस्थापनाका दिनमा वैदिक विधिपूर्वक राखिएको पहेँलो जमरालाई समृद्धिको प्रतीकको रुप मानी लगाउने गरिन्छ । जमराले विभिन्न रोगव्याधिमा औषधिका रुपमा काम गर्ने तथ्य वैज्ञानिकरुपमा समेत पुष्टि भइसकेको छ । जमरा शीतलता र नूतनको प्रतीक पनि हो।
टीका लगाइमाग्ने पूर्व फर्कनुपर्छ र टीका लगाइदिनेले भने पश्चिम फर्केर बस्नुपर्ने शास्त्रीय मान्यता छ ।
विजया दशमीको टीकामा पुरुषलाई दिने आशीर्वचन :
सौर्यं शान्तनवे बलं हलधरे सत्यं च कुन्तीसुते ।
स्त्रीलाई दिने आशीर्वचन :
जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी,
जयत्वं देवि चामुण्डे जय भूतार्तिहारिणी,